भारत–चीनबीच त’नाव : फेरि दिल्ली सरकारले लगायो पब्जीसहित चिनियाँ ४७ एप्समा प्र’तिवन्ध ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/भारत–चीनबीच त’नाव : फेरि दिल्ली सरकारले लगायो पब्जीसहित चिनियाँ ४७ एप्समा प्र’तिवन्ध !
काठमाडौँ। भारतले दोश्रो पटक चीनलाई डिजिटल झ’ट्का दिएको छ। गल्भान उपत्यकामा भएको हिं सा त्मक झ ड पपछि भारतमा ५९ वटा चिनियाँ एप्सहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको थियो। जसमा लोकप्रिय एप टिकटक पनि परेको थियो। यसबीच भारत सरकारले फेरि चीनलाई डिजिटल झ’ट्का दिएको छ। भारत सरकारले थप ४७ वटा चिनियाँ एप्समा प्र’तिवन्ध लगाएको छ ।
भारत सरकारले यसअघि नै टिकटक लगायत ५९ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले भारत सरकाको नजर २७५ वटा चिनियाँ एप्समाथि रहेको भारतीय गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा लोकप्रिय मोबाइल खेल पब्जी पनि परेको समाचार माध्यमहरु जनाएका छन्।
तर, उक्त विषयमा भारत गृह मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको नभभारत टाइम्सले जनाएको छ। यद्यपि यस मुद्दा सम्बन्धी आधिकारिक स्रोतले चिनियाँका अनुप्रयोगहरुलाई निरन्तर समीक्षामा लिइरहेको र कहाँबाट सञ्चालित भएको भन्नेबारे पत्ता लगाउन कोशिस गरिरहेको जनाएको छ। अधिकारीका अनुसार, केहि अनुप्रयोगहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि ख’तरा हुन सक्छ।